Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1079
Par Taratra sur 18/07/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Landy R., Fano, Tiana R.
Fifamoivoizana : “Manararaotra ny polisy monisipaly”, hoy ny taxi
Par Taratra sur 18/07/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Nitokona naneho ny tsy hafaliany amin’ny fomba fiasan’ireo polisy monisipaly ireo mpamily taxi ny asabotsy teo tetsy Analamahitsy. Nambaran’izy ireo tamin’izany fa “manararaotra loatra ireo polisy monisipaly ireo”. Raha ny filazan’ny mpitondra taxi hatrany, tsy tokony manasazy avy hatrany ny kaominin’Antananarivo fa tokony mifampitaiza aloha hahafahana manatsara ny fomba fiasa. Mitaky ny fihaonana amin’ny tompon’andraikitra […]
Telma : nohamoraina ny fampiasana MVola
Par Taratra sur 18/07/2016 Divers, NS Malagasy
Nohatsaraina ny tolotra ! Na efa tsotra, haingana ary azo antoka aza ny fampiasana MVola, vao manika nohamoraina indray, hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa. Misy fomba vaovao ahitan’ny mpanjifa ny fampiasana azy rehetra amin’ny finday smartphone. Tsy voatery manatona ny toeram-pivarotana sy ny masoivoho Telma, fa azo ampiasaina eo noho eo, na aiza na aiza misy ny […]
Sava : midangana ny vidin’ny lavanila maitso
Nisokatra ny 15 jolay teo ny fotoam-piotazana lavanila any amin’ny faritra Sava, any amin’ny toerana mangatsiaka, anelanelan’ny morontsiraka sy ny afovoan-tany. Tsara ny vokatra amin’ny ankapobeny, saingy tsy mitsaha-mitombo ny vidiny. Raha nanodidina ny 50.000 Ar ny kilaon’ny lavanila maitso ny taona 2015, tafakatra 100.000 Ar izany tamin’ny fisokafan’ny fotoam-piotazana teo. Tsy nijanona teo anefa, […]
Toetr’andro : mihamanatona ny rivodoza Abela
Mananontanona ao avaratra atsinanan’ny Nosy ny rivodoza. Nivadika ho rivodoza ary efa nahazo anarana “Abela” ilay faritra andro ratsy ao amin’ny ranomasimbe Indianina omaly tolakandro. “Tempete tropicale moderée” no sokajy misy azy ary any amin’ny 1.600 km avaratra atsinanan’ny Nosy no misy ny foibeny. Mizotra mianandrefana somary atsimo ny diany raha ny filazan’ny mpamantatra ny […]
Faritra iva : miomana amin’ny fiatrehana ny tondra-drano ny mponina
Nanatanteraka vonjy voina andrana fanao rehefa misy tondra-drano ny BNGRC teny amin’ny fokontany Ankasina sy Ambaravarankazo, Ambodimita ny asabotsy teo. Nampahafantarina ny mponina tamin’izany ny tokony hatao mialohan’ny tondra-drano sy mandritra ny loza ary aorian’ny fiakaran’ny rano. Natao izany hanomanana sahady ny sain’ny mponina amin’ny faritra iva hiatrika ny loza raha sendra misy fiakaran’ny rano […]
Fampianarana : efa vonona ireo mpiatrika ny fanadinana BEPC
Nijery ny efitrano hisy azy mandritra ny efatr’andron’ny fanadinana BEPC omaly ireo mpiadina. Nifanotofana ny foibem-panadinana nijerena ny efitrano. Nilaza ny efa vonona ireo mpiadina sendra anay na dia mitaintaina aza. Hanomboka amin’ny taranja malagasy ny laza adina anio maraina. Manomboka amin’ny 7ora sy sasany ny fiantsoana anarana saingy amin’ny 8 ora vao manomboka mikatroka […]
Volley – Can U18 F 2016 : mbola olana mipetraka ny mpanazatra nasionaly
Par Taratra sur 18/07/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Hatreto, tsy mbola voatendry na/sy tsy manana mpanazatra nasionaly ny ekipam-pirenena hiatrika ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika eo amin’ny volley zazavavy U18. Efa manomboka kosa ny fanazarantenan’ireo mpilalao. Antomotra ny fotoana. Araka ny efa fantatra, hampiantrano ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika eo amin’ny taranja volley, sokajy U18 zazavavy, na “Can U18 Filles” i Madagasikara. Hotanterahin’ny […]
Rallye Amoron’i Mania 2016 : voalohany ny ekipazy Ndrianja sy Fanja
Ny ekipazy avy amin’ny klioba Asacm, nisy an’i Ndrianja sy Fanja, nitondra ny fiara Subaru Impreza no nandrombaka ny fandresena, teo amin’ny rallye Amoron’i Mania. Dingana fahatelo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, amin’ny familiana fiarakodia, izay notontosaina, tany Ambositra ny 14 ka hatramin’ny 16 jolay lasa teo. Teo amin’ny andro faharoa, dia efa hita […]
Pétanque – «Masters 2016» : tsy namokatra indray ny Malagasy
Resy teo amin’ny lalao manasa-dalana ny ekipa malagasy, nisy an’i Taratra sy Mamy ary Bôlô, teo amin’ny dingana faharoa amin’ny «Masters 2016», taranja tsipy kanetibe. Fihaonana izay notanterahina tao Romas-sur-Isère, ny 15 jolay lasa teo. Lavon’ny ekipan’i Fournié, tamin’ny isa 13 noho 4, ry zalahy. Teo amin’ny ampahefa-dalana nefa dia nanilika ny ekipan’i Romans-sur-Isère, tamin’ny […]
Tenisy – «Coupe Davis Afrique 2016» : tafakatra sokajy faharoa i Madagasikara
Tratra ny tanjona ho an’i Madagasikara, eo amin’ny fiadiana ny «Coupe Davis Afrique 2016». Tafakatra ao amin’ny sokajy faharoa ny Malagasy, eo amin’ny taranja tenisy, lehilahy. Herintaona aty aoriana, tafaverina ao anaty sokajy faharoa, iarahan’i Afrika sy Eoropa, amin’ny «Coupe Davis», taranja tenisy indray i Madagasikara sy ny ekipam-pirenena malagasy, lehilahy. Nahavita dingana goavana ny […]
Asan-jiolahy : 8 lahy nanafika toby fivarotan-tsolika
Notafihina valo lahy nanao saron-tava, nitondra P.A sy basy lava ny tobin-tsolika iray tany Fenoarivo Atsinanana, ny zoma lasa teo, tokony ho tamin’ny 12 ora alina. Nafatotr’izy ireo ny mpiambina ary novakin’izy ireo ny varavarana miditra ao amin’ny birao. Norobain’ireto jiolahy ny sekin-tsolika miisa 52 amin’ny vidiny 40 000 Ar. Nobatain’ireo koa ny “coffre fort” nisy […]
Officier Principal de police, R. Jules : mila fanohanana ny zanaky ny polisy lavo am-perinasa
Tonga nankahery ireo ankizy kambotin’ny polisim-pirenena tezaina ao amin’ny ivotoeram-panabeazana ao Ambatolampy tamin’ny anaran’ny fianakaviamben’ny polisim-pirenena ny Amical des Commissaires de police (ACP), ny asabotsy teo. Miisa 66 ireo zanaka polisy lavo am-perinasa tezaina ao amin’ity ivotoeram-panabeazana ity ka miisa 27 ny vehivavy raha 39 kosa ny lehilahy. « Ny polisim-pirenena no mandray an-tanana ny fikarakarana […]
Rajaonah A. : “Efa tsy mahafaly ny maro ny fitondrana”
Par Taratra sur 18/07/2016 NS Malagasy, NS-Politique
“Ny zava-misy, ireny nitranga ny andro talata ireny: azo lazaina hoe efa tena tsy faly intsony amin’io fitondram-panjakana io izao ny karazan’olona rehetra izao.” Fanehoan-kevitry ny filohan’ny antoko Otrikafo, Rajaonah Andrianjaka, teny Andravoahangy Ambony, omaly, io, manoloana ny toe-draharaham-pirenena. Nihetsika, ohatra, ireo sendikalista tao amin’ny Afo sendikaly, ny volana mey: be dia be ny olona […]
Fikoropahana manoloana ny fanoherana : ny asa vita no tena herin’ny mpitondra ka anohanan’ny vahoaka azy
Mikoropaka ny mpitondra sy ny mpiara-dia aminy manoloana ny fanoherana, soketaina ho fanonganam-panjakana. Na tsy fahazakana tsikera izany, na fanahiana fidinana an-dalambe… Tsy fahatokisan-tena? Na tsy mandaitra intsony ny fampandriana adrisa hoe mitady fitoniana sy fiaraha-miasa; eny, na ny asa vita aza. Nisy fanaovan-tsonian’ireo antoko miara-dia amin’ny fitondrana HVM, teny Anosy, ny faran’ny herinandro teo: […]
Fanonganam-panjakana tany Tiorkia : olona 90 maty, miaramila 1.500 voasambotra
Tsy mbola nisy tahaka ity! Nitrangana fanonganam-panjakana tany Tiorkia ny zoma alina lasa teo. Andiana miaramila nikomy nikasa ny hanongana ny filohan’ny Tiorka, Erdogan. Nahaaro ity filoham-pirenena ity kosa ny miaramila tsy nivadika tamin’ny fanjakana, ka raikitra ny fifandonana. Olona efa ho 90 maty, 1.200 naratra, ary miaramila 1.500 indray voasambotra tamin’izany. Naka ny televiziona […]
Lalàn’ny fifandraisana : fandriky ny Antenimiera ny hoe fanatsarana any aoriana
Naneho ny heviny mikasika ny lalàn’ny fifandraisana ny filohan’ny Antenimierampirenena tamin’ny famaranana ny fivoriana tsy ara-potoana, afakomaly. Nivoitra tamin’izany ny hoe hotohizana ny fifanakalozan-kevitra amin’ny fanatsarana tokony hatao.Ta miendrika fandrika ihany anefa izany… “Raha miroso amin’ny demokrasia isika: izay mety araka ny toe-piainana amin’ny fiarahamonina misy ankehitriny aloha no ezahina iaingana. Azo atao tsara ny […]
Itaosy Ambaniala : mpivady novonoina tamin’ny fomba feno habibiana
Tsy mifaditrovana ireo olon-dratsy! Mpivady tokony ho 70 taona eo, maty nisy namono tao an’efitranony teny Ambaniala Itaosy, ny zoma alina teo. Novonoina tamin’ny fomba feno habibiana tanteraka izy ireo. Tsy nisy very tao an-trano na iray aza. Voalaza fa varavarankely iray no nisokatra tamin’io, mifefy tamboho avo ny tanàna ary misy mpiambina telo. Efa […]
Miasa… jamba sy marenina vahoaka
Par Taratra sur 18/07/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Mbola ny amin’ny lalàna mifehy ny fifandraisana ampitaina amin’ny haino aman-jery ihany. Sakanana ny fahalalahana miteny sy maneho hevitra, kantsanana ny haino aman-jery na amin’ny fakana na famoahana vaovao. Eo koa ny tsy fahazoan’ny haino aman-jery tsy miankina mahahenika an’i Madagasikara, ohatra. Amin’izany, ataon’ny mpitondra sy ny antokony ampihimbama ny haino aman-jerim-panjakana. Inona ny dika […]
Ambohimangakely : olona 7 mpangalatra sy mpivarotra taolam-paty tratran’ny zandary
Par Taratra sur 18/07/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Miandahy miambavy ny mpangalatra taolana eto an-tanàna eto. Fito mianadahy izy ireo tratra ambody fasana teny Ambohimahatsijo, tamin’ny alimbe. Olona fito mianadahy voalaza fa mpangalatra sady mpivarotra taolam-paty, voasambotry ny zandary any Ambohimangakely, ny alin’ny 15 jolay lasa teo. Tratra ao amin’ny fokontany Ambohimahatsinjo izy ireo. Teo am-pamakiana fasana mihitsy no sarona ireto olona fito […]
Asa soratra : namoaka ny « Deux fois une » i Hanitr’ony
Par Taratra sur 16/07/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Tsy lefy laza, eto Madagasikara ka hatrany ivelany any, ireo sanganasan’i Dox (Razakandraina Jean Verdi Salomon), mpanoratra tsy atoro ny maro intsony. Mandova ny talentany sy manara-dia azy ireo taranany, toa an’i Hanitr’Ony, zafikeliny sady filohan’ny sampana Havatsa Upem any Frantsa. Natonta fanintelony ny « Chants capricorniens », amboaran-tononkalo tokana amin’ny teny frantsay, nosoratan’i Dox. Ny antony, […]
AmbondronA : hanao seho ho an’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena
Mifamotoana amin’ny mpankafy rehetra eny Itaosy sy ny manodidina indray ny tarika AmbondronA, ny alahady 24 jolay izao. Hanatontosa fampisehoana goavana, ao amin’ny kianjan’ny Lycée katolika Saint-Michel izy ireo, amin’io fotoana io. Tsy vao izao ity tarika manana ny lazany ity no hiaka-tsehatra eny Itaosy, saingy hanana ny mampiavaka azy ity indray mitoraka ity. Araka […]
Noho ny tsy fahalalana ny IGM : tsy manara-penitra ny vatosoa miondrana
Par Taratra sur 16/07/2016 Economie, NS Malagasy
Gaboraraka! Tsy voahodina avokoa ny 94%-n’ny harena an-kibon’ny tany miondrana any ivelany avy aty Madagasikara. Vitsy anefa ny mahalala fa manana laboratoara manokana isika, ny Ivontoerana ho an’ny harena an-kibon’ny tany eto Madagasikara (IGM). Ahafahana mitily ny kalitaon’ny vatosoa sy manodina azy ireny, ka hitondra vokatsoa bebe kokoa eto ho an’ny mpandraharaha sy ny firenena. […]
« Précédent 1 … 1 077 1 078 1 079 1 080 1 081 … 1 245 Suivant »